Tontolo Arabo: hevitra nanoloana ny fandrarana minaret any Soisa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2009 18:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Français, русский, Italiano, বাংলা, English
Nanaiky ny handrarana minaret vaovao [tilikambon'ny moske silamo] tamin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka ny alahady 29 Novambra lasa teo ny 57,5%-n'ny mpifidy Soisa, izay manori-dalana ho amin'ny fanitsiana ny Lalampanorenana. Any amin'ny fananganana tilikambo silamo vaovao – fa tsy ny moske – moa no iantefan'ity fitsapa-kevi-bahoaka ity fa tsy any amin'ny tilikambo silamo efatra efa mijoro ao Soisa ao.
Namoaka lahatsoratra manameloka ny fanapahan-kevitry ny Soisa ao amin'ity fehezan-kevitra ity ilay Libano-Amerikana Pierre Tristram mamaham-bolongana ho an'ny About.com:
Ary dia nofaranan'i Tristram tahaka izao ny heviny: “Nihafoana haingana dia haingana ny fahasamihafana eo amin'ny ankapoben'olona any Soisa sy ny kabarim-panavakavahana fanaon'ilay Iraniana antsoina hoe Mahmoud Ahmadinejad.”
Nikaroka ny anton'izao safidy izao ilay mpamaham-bolongana Ejipsiana Hicham Maged , ka nafehiny fa:
Mpamaham-bolongana Ejipsiana hafa izay manana ny anaran'ny bolongana manao hoe Not Green Data dia manaiky fa “ny moske dia moske,” saingy malahelo izy fa manimba ny hakanton'ny moske ny fandrarana ataon'ny Soisa:
ka mamelabelatra ity afisy hitantsika ity:
Ilay Alzeriana-Amerikana The Moor Next Door kosa indray dia mahita ny fandrarana ho adim-pahefana ka manamarika fa:
Manana fomba fijery miavaka amin'izay zava-dehibe indrindra amin'ity raharaha ity ilay mpamaham-bolongana Syriana Maysaloon. Raha tsy resahina ny tsy fandefera-tsaina, tahotra, ary ny dikan'ny maritrano, dia manome hevitra tahaka izao ny mpamaham-bolongana:
Hamaranana azy ny hevitr'ilay maoritaniana mpampiasa Twitter weddady rehefa nivoaka ny valin'ny fitsapa-kevi-bahoaka sady mamehy ny fahatsapan'ny maro. Hoy izy, ” Tsy misy afa-mandà intsony amin'izao ka hanao hoe tsy manana olana amin'ny miozolomana i Eoropa, ary tsy misy afa-mandà ny fitomboan'isan'ny miozolomana any.”